Iphutha leKhamera ye-Mac Ayisebenzi - Ukulungiswa Okungenzeka - Pc
Iphutha leKhamera ye-Mac Ayisebenzi - Ukulungiswa Okungenzeka
Ikhamera ye-Mac ayisebenzi inkinga evame ukubonwa ngenxa yezinkinga ezithile. IMacBook neMac ingenye yemikhiqizo emikhulu kakhulu yekhompyutha eyenziwe yi-Apple. Ukuxazulula inkinga ye-webcam kudinga ukuqonda lapho inkinga ivela khona kukhompyutha. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi siyisombulula ngokushesha le nkinga. Kulo mhlahlandlela, sizobe sibheka izingqinamba ezingaba khona futhi sibuyisele idivayisi emgqeni. Ngo-2020 izingcingo zevidiyo ziba yingxenye yempilo yethu yansuku zonke. Sidinga ukuba nokusetha okusebenzayo kwe-PC, okusenza sikwazi ukuxhumana okulula.
Kungani i-Mac Camera yakho ingasebenzi?
Manje njengoba sisebenzisa amakhamera ethu kakhulu emsebenzini wethu kusuka enqubweni yasekhaya, kuyacasula uma iMac yethu yehluleka ukuletha. Uma inkinga ingeyona ukwehluleka okukhulu kwehadiwe, ungalindela imiphumela esheshayo ngesiqondisi sethu sokulungiswa kwekhamera ye-mac. Lokhu kungenzeka ngenxa yezinkinga zesoftware. Lezi zinkinga ze-mac ziyinto engalungiswa kalula ngokuthwebula okuncane. Ukulimala ngokomzimba kukhamera yakho kungenzeka ngenxa yezizathu eziningi. Kungadinga ukuthi uvakashele izikhungo zokunakekelwa kwe-Apple. Kulo mhlahlandlela, sizogxila kakhulu kuzizathu zesoftware.
Uma ikhamera ingatholakali kwi-MacBook, kuzovela isaziso sokuthi “Ayikho ikhamera exhunyiwe”. Kungaba nezizathu ezahlukahlukene zekhamera ye-mac, ezingasebenzi, futhi hhayi zonke ukwehluleka kwehadiwe.Kungaba yinoma yini eqondiswe kusoftware, kusuka ekuxhumekeni kwe-inthanethi kuya ekuthelelekeni kwe-malware — noma ngabe ikuphi, kuhlale kunesixazululo esisuselwa kusoftware.
Ufuna Ukuthenga Ama-Airpods? Hlola I-Apple AirPods Pro vs AirPods 2 Ukuqhathanisa.
Ukulungiswa Okungenzeka Kwephutha LeKhamera ye-MAC Akusebenzi:
Ngezansi ezinye zezixazululo ezijwayelekile abasebenzisi abangazisebenzisa ukwenza ukuthi i-cam yabo isebenze futhi iqhubeke:
1. Qala kabusha i-Mac yakho
Kungaba nethuba lokuthi ezinye izinhlelo zokusebenza zisebenzisa ikhamera ngemuva.Ngakho ukuqala kabusha idivayisi kungabulala yonke imisebenzi yangemuva.
Ukuqala kabusha idivayisi-
Abasebenzisi kufanele bachofoze ku-Apple Icon kubha yemenyu ephezulu yedivayisi yakho.
Kufanele ukhethe inkinobho yokuqalisa kabusha.
Ukuqala kabusha okulula kungasheshe kuqinisekise ukuthi ikhamera iqala ukusebenza. Kungabonakala kunesidingo, kepha abasebenzisi abane-PC yabo esebenza usuku lonke bangaqonda.
Bheka izinhlelo zokusebenza usebenzisa ikhamera ngasikhathi sinye:
Isoftware eyodwa ingasebenzisa ikhamera ngesikhathi esisodwa. Ngakho-ke ukubheka ukuthi ngabe izinhlelo zokusebenza ezingemuva ziyayisebenzisa yini ikhamera-
Qalisa Umsebenzi Wokuqapha kusuka kuzinhlelo zokusebenza.
Yeka zonke ezinye izinhlelo zokusebenza ezivulekile nezinsiza usebenzisa uhlelo lokusebenza (njenge-Skype, i-FaceTime, njll.)
Ukulondoloza umsebenzi nokuvala zonke izinhlelo zokusebenza kungaba yindlela engcono uma abasebenzisi bengaqiniseki ukuthi yiluphi uhlelo lokusebenza olusebenzisa ikhamera.
Ikhamera esetshenziswe isikhathi eside ingadala izingqinamba ezithile. I-Apple ibuye ibalule ukuthi kuhle ukumisa zonke izinhlelo zokusebenza zekhamera ezinjengeSkype, Zoom, Google meet, neFacetime.
Sebenzisa i-Force Quit yekhamera engasebenzi ku-Mac:
Ukuqala kabusha kuthatha isikhathi futhi kungaphazamisa inqubo yomsebenzi. Ngakho-ke i-Command Line Prompt yokuphoqa ukuyeka inqubo ingasiza-
Iya ku-Spotlight Search bese uthayipha i- “Terminal” bese uyivula.
Manje thayiphaSudo killall VDCAssistant.
Shaya ukubuya kukhibhodi bese ufaka iphasiwedi yomlawuli uma utshelwa.
Qalisa kabusha uhlelo lokusebenza ukuhlola isimo. Kuyasiza uma ubhekane nenkinga isikhathi eside.
Setha kabusha isilawuli sohlelo lwakho lwe-Mac:
Uma ikhamera eku-Mac ingasebenzi futhi akukho lutho olungenhla olubonakala lusiza, khona-ke ukusetha kabusha kanzima kwabalawuli bedivayisi yakho kungasiza.I-SMC ilawula imisebenzi eminingi ye-Hardware kwi-Mac, futhi ukuyivula kabusha kungasebenza njengesixazululo senkinga.Ukusetha kabusha i-SMC ku-MacBook (2017 nangaphambilini).
Abasebenzisi bangafaka i-adaptha yamandla.
Bamba inkinobho ye-Shift + Control + kanye nenkinobho yamandla ngasikhathi sinye.
Vumela imizuzwana engu-30 idlule ngaphambi kokuphakamisa okhiye. Izovula i-Mac up.
Ukusetha kabusha i-SMC kuma-MacBooks wakamuva (kusebenzela i-AIR ne-Pro)
Abasebenzisi kufanele babambe inkinobho yamandla kudivayisi yakho ye-Mac amasekhondi ayishumi.
Dedela inkinobho yamandla bese ulinda kancane.
Vula iMac futhi.
Uma inkinga iqhubeka, zama isinyathelo esingezansi–
Cindezela bese ubamba ukhiye weShift ongakwesokudla, ukhiye we-Option ongakwesobunxele, kanye nokhiye Wokulawula kwesokunxele imizuzwana eyisikhombisa.
Kufanele ubambe inkinobho yamandla imizuzwana embalwa.
Dedela konke bese ulinda ikhompyutha yakho ukuthi isethe kabusha.
Kungasiza ukusetha kabusha abashayeli be-mac. Kuyasiza ukuxazulula noma yiziphi izingqinamba zokuphathwa kwezinsizakusebenza zangaphakathi idivayisi ebhekene nazo.
Lungiselela Ukusebenza Kwesistimu Ejwayelekile:
Amadivayisi we-Mac angagcina futhi enze amafayela amaningi wesikhashana angahle anciphise ijubane lawo. Ikhamera ye-Mac kungenzeka ingasebenzi esimweni esinjalo. Lawa ngamafayela esikhashana adingekayo ukuze asebenze nganoma yisiphi isikhathi esithile kepha ayasebenza emva kokuphothula imisebenzi.
Kungakuhle ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezifana ne-CleanMyMac X ukwenza ukuhlanza uhlelo njalo nokwenza i-Mac ngokuzenzakalela.Uhlelo lokusebenza lusiza ukuhlanza wonke amafayela nezinhlelo zokusebenza ezingasetshenziswanga, inqolobane yohlelo lokusebenza engahleliwe, futhi lisiza abasebenzisi ukuvikela iMac yabo ezinsongweni naku-Malware, ibenze bangasebenzi ngemizuzwana. Kuyasiza nokuhlanza ukushayela okuthathwe okunamathiselwe kwe-imeyili namakhukhi nazo zonke ezinye izinto ezingadingekile ukunika amandla isipiliyoni esenzelwe umsebenzisi wokugcina.
Ekugcineni, ukuxhumana kwe-inthanethi nesivinini sakho kufanele kwanele (okungenani u-128 kbps, noma u-1 Mbps wezingcingo zevidiyo ze-HD FaceTime).Zama i-WiFi Explorer, i-analyzer yenethiwekhi esiza ukukhomba nokuxazulula izingqinamba zenethiwekhi ezivamile.Ihlola imvelo yenethiwekhi (ibhendi yebhendi, ikhwalithi yesiginali, isimo sezokuphepha), ikhomba izingxabano zesiteshi nezinkinga zokusabalala, futhi inikeze izincomo ezisheshayo zokuthuthukisa i-WiFi.
Kuthiwani uma kungekho okusebenzayo?
Ekugcineni, uma ingekho i-software tweaks esizayo, umsebenzisi kufanele athole i-Apple Store noma uchwepheshe ogunyaziwe we-Apple ukuthi abheke ukusethwa kwekhamera yakho. Kukhona amathuba okukhishwa kwe-Hardware. Kulokhu, akekho noyedwa wabo, njengoba kushiwo ngaphambili, ama-tweaks azosebenza. Lawa ma-hacks asheshayo ayasebenza kuphela uma ubhekene nezinkinga zesoftware.
Kulesi siqondisi, sizama ukuxazulula izinkinga zekhamera ye-mac, hhayi ukusebenza. Sekukonke le nkinga ingahle ibonakale ilula. Izixazululo ziqonde ngqo. Siyethemba ukuthi i-athikili yethu ikusiza ukuthi ubuyele emuva emhlanganweni wakho wesikole, wekolishi noma womsebenzi.
Landa i-VLC Media Player ye-Mac
Indlela Lungisa iPhone Ayikwazi Xhuma iTunes?
Shintsha I-Exclusive Anuchard, Ikhuthazwe yi-Soul Blazer & Terranigma, Ithola i-Trailer ye-Gameplay kanye Nosuku!
I-Coraline 2: Usuku Lokukhishwa: Konke Odinga Ukukwazi!